गब्रिएल स्वर्गदूत मरियमलाई भेट्छन्‌ | साँचो विश्वास
मरियम छक्कमाथि छक्क पर्छिन्‌। तिनको घरमा एक जना पाहुना आएका छन्‌। ती पाहुनाले मरियमका आमाबाबुको बारेमा सोधखोज गर्दैनन्‌। ती पाहुना त मरियमलाई पो भेट्न आएका रहेछन्‌! उनी नासरतबाट आएका भए त मरियमले देख्नेबित्तिकै चिन्ने थिइन्‌। ती पाहुना तिनको सानो सहर नासरतका बासिन्दा होइनन्‌ भनेर प्रस्टै चिनिन्छन्‌। हो, ती पाहुना हेर्दाखेरि पनि एकदमै फरक देखिन्छन्‌। उनी अनौठो तरिकाले मरियमलाई सम्बोधन गर्छन्‌: “हे परमेश्वरको निगाह-पात्र, तिमीलाई अभिवादन छ। यहोवा तिमीसित हुनुहुन्छ।”—लूका १:२६-२८ पढ्नुहोस्।
३ बाइबलले मरियमबारे त्यत्ति धेरै बताएको छैन भनेर थाह पाउँदा धेरैलाई अचम्म लाग्छ। तिनको पृष्ठभूमिबारे बाइबलले त्यति धेरै बताएको छैन, तिनको व्यक्तित्वबारे अलिअलि मात्र बताएको छ, झन्‌ रूपरङ्गबारे त केही पनि बताएको छैन। तर बाइबलले मरियमबारे जे-जति बताएको छ, त्यसबाट पनि हामी तिनीबारे धेरै कुरा थाह पाउन सक्छौं।
५ मरियमलाई भेट्न आउने पाहुना कुनै साधारण मानिस थिएनन्‌। उनी गब्रिएल स्वर्गदूत थिए। जब स्वर्गदूतले मरियमलाई “निगाह-पात्र” भनेर सम्बोधन गरे तब तिनी “साह्रै घबराइन्‌।” (लूका १:२९) मरियमले कसबाट निगाह पाएकी थिइन्‌? तिनले मानिसहरूबाट निगाह पाउने आशा गरेकी थिइनन्‌। ती स्वर्गदूतले यहोवा परमेश्वरको तर्फबाट निगाह पाएको कुरा गरिरहेका थिए। यो तिनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। तर पनि आफूले पहिल्यै परमेश्वरको निगाह पाएकै छु नि भनेर तिनी घमन्डले फुलिनन्‌। मरियमको उदाहरणबाट हामी यस्तो पाठ सिक्न सक्छौं: हामीले परमेश्वरको निगाह पाउन प्रयास गर्नुपर्छ, पहिलादेखि नै पाएका छँदैछौं भनेर घमन्ड गर्नु हुँदैन। परमेश्वर अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर दीन तथा नम्रहरूलाई माया गर्नुहुन्छ र साथ दिनुहुन्छ।—याकू. ४:६.
७ अझै रोचक कुरा, मरियमका छोरा “सर्वोच्च परमेश्वरको छोरा कहलाइनुहुनेछ” भनेर ती स्वर्गदूत बताउँछन्‌। तर मरियमको त भर्खरै मात्र मगनी भएको थियो, विवाह हुन त बाँकी नै थियो। तिनले कसरी छोरा जन्माउन सक्थिन्‌ र? त्यसमाथि पनि एउटी मानव स्त्रीले कसरी परमेश्वरको छोरा जन्माउन सक्छिन्‌ र? खुलस्त भएर मरियम यस्तो प्रश्न सोध्छिन्‌: “यो कसरी हुनसक्छ किनकि कुनै पुरुषसित मेरो शारीरिक सम्पर्क भएको छैन?” (लूका १:३४) याद गर्नुहोस्, आफू कुमारी नै छु भनेर मरियमले लाज नमानीकन भनिन्‌। आफ्नो कौमार्य नगुमाएकोमा तिनले गर्व गरिन्‌। आजकल थुप्रै जवानहरू आफ्नो कौमार्य गुमाउन हतार गर्छन्‌ र कौमार्य नगुमाएकाहरूको खिसीटिउरी गर्छन्‌। हो, संसार परिवर्तन भइसक्यो। तर यहोवा परमेश्वर परिवर्तन हुनुभएको छैन। (मला. ३:६) यहोवाको नैतिक स्तर पछ्याउनेहरूलाई मरियमको पालामा उहाँ जत्ति कदर गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यत्तिकै कदर गर्नुहुन्छ।—हिब्रू १३:४ पढ्नुहोस्।
९. (क) आलोचकहरूले मरियममाथि शङ्का गर्नु किन गलत हो? (ख) मरियमलाई विश्वस्त पार्न गब्रिएलले के भने?
९ आलोचकहरू र चर्चका केही धर्मविद्हरूसमेत मरियमले कुमारी अवस्थामै बच्चा जन्माइन्‌ भन्ने कुरा मानिलिंदैनन्‌। तिनीहरूले जति नै जानेबुझेका भए तापनि एउटा सरल सत्यलाई भने बुझ्न सकेका छैनन्‌। स्वर्गदूत गब्रिएलले भनेझैं “आफूले बोलेको कुनै पनि कुरा पूरा गर्न परमेश्वरको लागि असम्भव हुँदैन।” (लूका १:३७) गब्रिएलले भनेको कुरा ती जवान मरियमले पत्याइन्‌ किनभने यहोवा परमेश्वरप्रति तिनको विश्वास बलियो थियो। तिनले अन्धाधुन्ध विश्वास गरेकी थिइनन्‌। सुझबुझ भएको अरू मान्छेले जस्तै मरियमले पनि प्रमाणकै आधारमा स्वर्गदूतले भनेको कुरा सही हो भनेर मानिलिएकी थिइन्‌। गब्रिएलले तिनलाई थप प्रमाण पनि दिन लागेका थिए। उनले मरियमकी नातेदार इलीशिबाको बारेमा बताए। इलीशिबा वृद्ध र बाँझी थिइन्‌। तर परमेश्वरको आशिष्‌ले गर्दा नै अहिले ती वृद्ध इलीशिबा गर्भवती भएकी थिइन्‌। कस्तो चमत्कार!
१४ गब्रिएलले इलीशिबाको बारेमा बताएको कुराले मरियमलाई निकै ढुक्क बनायो। त्यतिबेला मरियमको कुरा राम्रोसँग बुझ्न सक्ने व्यक्ति इलीशिबाबाहेक अरू को नै थियो र! इलीशिबालाई भेट्न मरियम हतारहतार यहूदाको पहाडी इलाकातिर लाग्छिन्‌। नासरतबाट यहूदासम्म जान सायद तीन वा चार दिन लाग्थ्यो। जब मरियम इलीशिबा र पुजारी जकरियाको घरभित्र पस्छिन्‌, तब मरियमको विश्वास बलियो बनाउन यहोवाले थप प्रमाण दिनुहुन्छ। यस्तो प्रमाण मरियमको लागि कत्ति ठूलो आशिष्‌! मरियमले इलीशिबालाई अभिवादन गरेको सुन्नेबित्तिकै पेटमा भएको बच्चा खुसीले उफ्रिएको कुरा इलीशिबा महसुस गर्छिन्‌। त्यति नै बेला इलीशिबा यहोवाको पवित्र शक्तिले भरिन्छिन्‌ र मरियमलाई “मेरो प्रभुकी आमा” भनेर सम्बोधन गर्छिन्‌। मरियमका छोरा प्रभु अर्थात्‌ मसीह हुनेछन्‌ भनेर परमेश्वरले इलीशिबालाई प्रकट गर्नुभएको थियो। साथै मरियम विश्वासी र आज्ञाकारी भएकीले इलीशिबाले तिनको यसरी प्रशंसा गरिन्‌: “तिमीले आफूलाई बताइएको कुरामा विश्वास गऱ्यौ, त्यसैले पनि तिमी आनन्दित हौ।” (लूका १:३९-४५) यहोवाले मरियमबारे जे-जे भन्नुभएको थियो, अब त्यो सबै पूरा हुन्छ भनेर अझ पक्का भयो।
१५ अब मरियम बोल्न थाल्छिन्‌। तिनले भनेका कुराहरू परमेश्वरको वचनमा सुरक्षित छन्‌। बाइबलमा रेकर्ड गरिएको मरियमको सबैभन्दा लामो भनाइ लूका १:४६-५५ मा पाइन्छ। (पढ्नुहोस्) यस रेकर्डले मरियमबारे धेरै कुरा बताउँछ। मसीहकी आमाको रूपमा सेवा गर्ने सुअवसर पाएकोमा तिनले यहोवाको प्रशंसा गरेकी छिन्‌। आफूले पाएको सुअवसरप्रति तिनी कत्तिको कृतज्ञ छिन्‌ भनेर तिनको भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ। यहोवा अहङ्कारी मानिसहरूको र शासकहरूको सेखी झार्नुहुन्छ र उहाँको सेवा गर्न चाहने नम्र र दीनहरूलाई मदत गर्नुहुन्छ भनेर मरियमले बताएकी छिन्‌। यहोवाप्रति तिनको विश्वास कत्ति बलियो थियो भनेर यसबाट हामी बुझ्न सक्छौं। तिनीसित धर्मशास्त्रको ज्ञान कत्ति धेरै थियो भनेर पनि तिनको भनाइबाट बुझिन्छ। एउटा अनुमानअनुसार मरियमले २० पटकभन्दा धेरै हिब्रू धर्मशास्त्रबाट उद्धृत गरिन्‌। *
१९ सही निर्णय गर्न दयालु हुँदै यहोवाले यूसुफलाई मदत गर्नुभयो। मरियम साँच्चै चमत्कारपूर्ण ढङ्गमा गर्भवती भएकी हुन्‌ भनेर परमेश्वरको दूतले यूसुफलाई सपनामा बताए। यूसुफ कत्ति ढुक्क भए होलान्‌! मरियमले पहिलेदेखि नै यहोवाको निर्देशनअनुसार गर्दै आएकी थिइन्‌। अब पालो यूसुफको। मरियमले जस्तै तिनले पनि यहोवा जसो-जसो भन्नुहुन्छ, त्यसै-त्यसै गर्छन्‌। यूसुफ मरियमलाई आफ्नो घरमा भित्र्याउँछन्‌ र यहोवाको छोराको हेरचाह गर्ने विशेष जिम्मेवारी स्वीकार्न तयार हुन्छन्‌।—मत्ती १:२०-२४.
२० आजभन्दा २,००० वर्ष पहिलेका यी जवान दम्पतीको उदाहरणबाट विवाहित जोडीले र विवाह गर्ने विचार गरिरहेका व्यक्तिहरूले राम्रो पाठ सिक्न सक्छन्‌। मरियमले आमा बन्ने जिम्मेवारी स्वीकारेको र त्यसलाई राम्ररी पूरा गरिरहेको यूसुफले देखे। त्यसैले स्वर्गदूतले आफूलाई डोऱ्याएकोमा यूसुफ कत्ति कृतज्ञ भए होलान्‌। गम्भीर निर्णयहरू गर्नुपर्दा यहोवामा भर पर्नु कत्ति महत्त्वपूर्ण छ भनेर यूसुफले बुझेका थिए। (भज. ३७:५; हितो. १८:१३) परिवारको शिरको रूपमा निर्णयहरू गर्दा तिनी निकै होसियार र दयालु हुन्थे भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन।
२१ अर्कोतर्फ आफूलाई शङ्का गर्ने यूसुफसँग विवाह गर्न मरियम तयार भइन्‌। यसबाट हामी के सिक्न सक्छौं? पहिला त मरियमको कुरा सुनेर यूसुफलाई के गरौं कसो गरौं भएको थियो। तर भविष्यमा यूसुफ आफ्नो शिर हुने भएकोले तिनले निर्णय नगरुन्जेल मरियमले पर्खिरहिन्‌। त्यसरी पर्खंदा नतिजा राम्रो भयो। परिवारको शिरको निर्णयलाई पर्खनु अहिले ख्रीष्टियन स्त्रीहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ। यी सबै घटनाहरूबाट यूसुफ र मरियमले इमानदार हुनु र खुलस्त कुराकानी गर्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर सिके।—हितोपदेश १५:२२ पढ्नुहोस्।